Ruushka oo dhex dhexaadinaya Talibanka iyo Dowlada Afghanistan • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Ruushka oo dhex dhexaadinaya Talibanka iyo Dowlada Afghanistan
Ruushka oo dhex dhexaadinaya Talibanka iyo Dowlada Afghanistan
November 9, 2018 - By: Abdirizak Shiino
Waxaa maanta oo Jimce ah magaalada Moscow ee caasimada Ruushka ka furmay shirkii ugu horeeyey oo lagu dhex dhexaadinayo kooxda Talibanka iyo dowlada Afghanistan.
Shirkan ayaa waxaa ka qeyb galaya wafdi ka socda kooxda Talibanka oo markii ugu horeysay tagay shirkaasi uu soo qaban qaabiyey Ruushka oo hada bilaabay isku-dayga ugu danbeeyey ee la doonayo in xal loogu helo dagaalka ka socda wadanka Afghanistan.
Dowlada Afghanistan ayaan iyadu shirkan usoo dirin wafuud heer sare balse waxaa shirkan u matalaya Guddiga Dib u heshiisiinta oo ay dowlada Afghanistan horey u magacowday.
Xukuumada Ruushka ee dhex dhexaadintan bilowday ayaa sheegtay in shirarkan ay yihiin horudhac isla markaana rajo weyn ka qabaan in ugu danbeynta xal laga gaaro qodobada ay isku heystaan labada dhinac.
Horey ayey u dhaceen dadaalo ay isku dayeen dalalka Maraykanka, Pakistan iyo Qatar oo lagu doonayey in lagu dhex dhexaadiyo kooxdaasi Talibanka iyo xukuumada Afghanistaan kuwaasi oo markii danbe lagu fashilay.
Ruushka oo xiligan doonaya inuu soo celiyo saameyntii uu ku lahaan jiray caalamka ayaa isku dayaya inuu arrintan ku guuleysto, iyadoo xukuumada Putin horey ugu guuleystay inay ka miro dhaliso xabad-joojinta looga dhawaaqay qeybo kamid ah gobalada ay dagaalada ka socdeen wadanka Siiriya, iyagoo miiska wadahadalka isugu keenay xoogaga kala taageera dhinacyada ku dagaalamaya Siiriya gaar ahaan dalalka Turkiga iyo Iran.